Isbedelka BIG: Isbedelka ayaa ku Bilaabmaya Guriga - Sinnaanta Helitaanka Caalamiga ah
Isbedelka BIG: Isbedelka wuxuu ku bilaabmayaa guriga
EAI waxay biloowday Change Starts at Home si loo ballaariyo shaqadeena haweenka iyo gabdhaha reer Nepal. Mashruucan gaarka ah waxaa loogu talagalay in lagu tijaabiyo isbeddelada dhaqankeena bulshada iyo hababka hababka cilmi baarista adag iyo qiimeynta saameynta madaxbanaan.
Nepal, Waaxda Horumarinta Caalamiga ah ee UK (DFID); Jaamacadda Emory; Golaha Cilmibaarista Caafimaadka Koonfur Afrika (MRC)
Himilada Mashruuca - La shaqaynta lammaanayaasha si looga hortago rabshadaha wada noolaanshaha ee Nepal.
Barnaamijku wuxuu saameyn xoog leh ku yeeshay nolosheena. Horaan kama uusan hadlin qorshayaashiisa midkoodna… Hadda waxaan midba midka kale kala hadalnaa waxyaabaha ugu badan ee aan sameyno. Xitaa xiriirkeena galmada wuxuu dhacaa kaliya ka dib markii wax la isla qaato. "
- - Bikani, Isbeddelka Bilowga Guriga kaqeybgale
Sida ku xusan sahamintayada saldhiga ah, oo la sameeyay sanadkii 2016, iyadoo 1,800 haween ah ay ku faafeen seddex degmo oo Nepalese ah (Nawalparasi, Chitwa, iyo Kapilvastu), 1 ka mid ah 3 (30.3%) haweenku waxay sheegeen rabshado galmood iyo galmo sanadki ugu dambeeyay. Isla mar ahaantaana, ku dhawaad ​​saddex meelood meel (29%) ayaa la kulmay galmada shucuureed.
Saddexda degmo oo dhan, 360 lamaane isqaba ayaa kaqeybgalay faragelinta sagaalka bilood, oo ay kujireen manhaj dhameystiran - Manhajka BIG Change - todobaadle isdhexgal dhegeysi iyo wadahadal kooxeed, waxqabadyada wacyigalinta bulshada iyo taxane cusub oo riwaayad ah oo 39 ah oo loogu magacdaray Is Faham ( Samajdhari). Marka la isku daro, qaybahaani waxay wax ka qabtaan caadooyinka bulshada, dabeecadaha, iyo dabeecadaha sii wada rabshadaha ka dhanka ah haweenka iyo gabdhaha.
Isbedelka wuxuu ku bilaabmayaa guriga (Badal) waa sii socoshada howsha dhul goynta ee laga hirgaliyay barnaamijkeena Codka ee UNTF oo maalgeliyay, abaalmarino badanna ku guuleystay. Qeyb ka mid ah calanka Waaxda Horumarinta Caalamiga (DFID) ee 'Ka Shaqaynta Kahortaga Tacadiyada Ka Dhanka ah Haweenka cilmi baarista iyo barnaamijka hal abuurka, Change waa mid ka mid ah 13 deeqo hal-abuurnimo, oo uu hoggaamiyo Golaha Cilmibaarista Caafimaadka ee Koonfur Afrika. Qeyb muhiim ah oo ka mid ah 'Maxaa Shaqeynaya' diiradda ayaa ah in la soo saaro caddeyn adag oo ku saabsan waxa waxtar u leh ka hortagga VAWG. Tan awgeed, EAI waxay la shaqaysaa Jaamacadda Emory. Wada-hawlgalayaashayada maxalliga ah waxaa ka mid ah Falanqeeyayaasha Maaddooyinka (IDA) iyo Xarunta Kheyraadka Horumarinta ee Vijaya (VDRC)
Ujeeddada ugu weyn ee mashruucu wuxuu ahaa in lamaanaha isqaba ay siiso aqoon, xirfado, iyo meel ay si nabad ah wax uga qabtaan isu dheelitirka awooda ee cilaaqaadkooda, saameynta waxaa lagu xoojiyaa waxqabadyo ujeedadoodu tahay in la keeno lammaanaha, qoysaskooda, iyo hogaamiyaasha bulshada si dhaqdhaqaaq loogu badalo bulshada. caadooyinka, dabeecadaha, iyo dhaqanka. Barnaamijka awgiis, lamaanayaashu waxay sheegeen inay ka yara murmayaan, go'aamada wada gaarayaan oo ay ka wada hadlayaan qorshayaasha maaliyadeed. Labada qof ee isqaba waxay wadaagaan shaqooyinka guriga, xanaano caruureed, iyo ku mashquulida xiriir galmo oo ogolaan kara.
"Waxaan baranay sida loo falanqeeyo cawaaqibka dhaqankeenna iyo sida ay annaga noo saameyn doonto. Hadda, xitaa markaan xanaaqo, waxaan xasuustaa waxyaabihii looga wada hadlay kalfadhiga waxaanan isku dayaa inaan xanaaqay."
The Isbedelku wuxuu ku bilaabmayaa guriga wax ka qabashadu waa qayb ka mid ah tijaabooyinka la xakameynayo ee aan kala sooca lahayn (RCT) oo ay hirgaliso jaamacada Emory kaas oo diiradda saaraya saameynta waxqabadka dhaqdhaqaaqyada heerarka IPV iyo caadooyinka heerka bulshada. Wejiga ugu dambeeya ee daraasadda ayaa hadda socda. Ujeeddada daraasadda xogta dhamaadka ah ayaa ah in la caddeeyo in hal sano ka dib markii barnaamijka bilowga uu dhammaaday, isbeddelada caadiga ah ee u dhexeeya labada lamaane ay yihiin kuwo fog oo muddo dheer socda.
Intaa waxaa dheer, EAI ayaa deeq ka heshay Baanka Adduunka si loo barto saamaynta ku faafidda caadooyinka. Caddaynta taageeraysa istiraatiijiyadaha ugu wanaagsan ee lagu cabbiro ama la socon karo caadooyinka isbeddelka heerka bulshada ayaa ah mid aan jirin. Caddaynta badankood waxaa lagu soo saaraa iyada oo loo marayo tijaabooyin shaybaadh ama aragtida ciyaarta oo ka tagaya cilmi-baarayayaasha IPV iyada oo aan la helin qalab iyo habab si loo go'aamiyo saameynta iyo dariiqyada isbeddelka caadooyinka waaweyn. Daraasadda ay Bangiga Adduunku taageerayaan ayaa gacan ka geysan doonta yareynta farqiga u dhexeeya caddeynta ku saabsan kala-duwanaanshaha hab-dhaqanka lamaanaha ee meelaha dakhligoodu hooseeyo iyada oo ujeeddada dhammaadka looga hortago rabshadaha ka dhanka ah haweenka (VAW) si ballaadhan. Ugu dambeyntiina, EAI waxay ku guda jirtaa hawsha isku darka dhammaan Isbedelku wuxuu ku bilaabmayaa guriga Waxyaalaha loo isticmaali karo galka aaladda oo loo heli karo kuwa facooda iyo xirfadleyaasha si loo qiyaaso saamaynta shaqadan muhiimka ah.
ee lammaane ayaa dhammeystiray barnaamijka.
Labada qof ee isqaba ayaa ka qaybqaatay barnaamijkan sagaalka bilood ah.
Labada qof ee isqaba waxay sheegeen inay arkeen isbadal togan oo ka muuqda naftooda ama xiriirkooda.
Waan ogahay haddii aysan u ahayn naagtayda, markaa gurigeyga waa la dumi lahaa. Xaaskeygu waxay ku adkaysatay wax walba oo rajada ah in aan beddelo oo hadda xiriir wanaagsan la yeesho… Xitaa waxaan saaxiibbadayda iyo deriskayga uga sheegaa waxyaalaha wanaagsan ee aan ka bartay barnaamijka raadiyaha iyo kalfadhiga toddobaadlaha ah.	 Ashram
Bedelku wuxuu ka bilowdaa ka qaybqaataha guriga
In la fududeeyo EAI si loo cabbiro hannaankeena saxeexa hab-dhaqanka isbedelka dhaqanka bulshada si loo fududeeyo isbeddelka caadooyinka wanaagsan ee bulshooyinka adduunka.